Ugreen, हाम्रो उपकरणहरूको लागि विभिन्न सामानहरू | ग्याजेट समाचार
राफा रोड्रिगिज ब्यालेस्टेरोस | 28/10/2021 18:00 | Accesorios, ग्याजेटहरू
Actualidad ग्याजेटमा हामी हामीलाई सबैभन्दा मनपर्ने कुरा गर्न जारी राख्छौं, प्रयास गर्नुहोस् ग्याजेट र सामान र त्यसपछि तपाईलाई हाम्रा अनुभवहरू बताउनुहोस्। साथीभाइको यो पहिलो पटक भने होइन युग्रीन तिनीहरू यसको लागि हाम्रो अनुभव विश्वास गर्छन्। त्यसैले आज हामी Ugreen उत्पादनहरु को एक सानो प्याक को बारे मा कुरा गर्दै छ।
विशेष गरी, त्यहाँ चार सामानहरू छन् जुन हामी तपाइँसँग कुरा गर्न जाँदैछौं। एकअर्काबाट धेरै फरक छ, तर निर्माताको हस्ताक्षरको अतिरिक्त, तिनीहरूसँग केहि सामान्य छ। सबै भइसकेका छन् को लागी संकल्पित हाम्रो लागि जीवन सजिलो बनाउनुहोस्, र मद्दत गर्न कि हाम्रा इलेक्ट्रोनिक उपकरणहरूले सम्भव भएमा आफ्नो सम्भावनालाई थप विस्तार गर्दछ।
1 विभिन्न आवश्यकताहरूको लागि चार Ugreen उत्पादनहरू
2 Ugreen HiTune X5 हेडफोनहरू
3 Nintendo स्विच को लागी ब्लुटुथ एडाप्टर
4 ट्याब्लेट धारक
5 USB C बहु-पोर्टहरू
विभिन्न आवश्यकताहरूको लागि चार Ugreen उत्पादनहरू
हामीसँग केही छ हेडफोन्स TWS ताररहित उपकरणहरू, HiTune X5। ए USB-C एडाप्टर विभिन्न सम्भावनाहरु संग multiport .. द्वारा प्रसारण को लागी एक एडाप्टर ब्लुटुथ बाट nintendo स्विच। र अन्तमा, ए ट्याब्लेटको लागि डेस्कटप स्ट्यान्ड।
Ugreen HiTune X5 हेडफोनहरू
छोरा Ugreen बाट सबैभन्दा "शीर्ष" हेडफोनहरू र यसको उपस्थिति, र हाम्रो प्रयोगको अनुभव, यो पुष्टि गर्दछ। सबै भन्दा माथि, तिनीहरू आफ्नो शारीरिक उपस्थिति को लागी हड्ताल गर्दै छन्। तिनीहरूको आकार अरू कुनै मोडेलसँग मिल्दोजुल्दो छैन। र यो धेरैको लागि राम्रो समाचार हो। हामीले धेरै प्रकारका हेडफोनहरू देखेका छौं र परीक्षण गरेका छौं, र कहिलेकाहीँ गम्भीर डिजाइन गल्तीहरू "भिन्न" हुन बनाइन्छ।
को Ugreen X5 तिनीहरू मौलिक वा फरक डिजाइनको उदाहरण हुन्। र यद्यपि स्वादको लागि, रंगहरूले तिनीहरूको लागि एक विशिष्ट उपस्थिति देखाउँछन् गोलाकार आकारहरू र खैरो यसको निर्माणको लागि छानिएको छ। वास्तवमा, छनौट गरिएको निर्माण सामग्री र चमक रंग समाप्त तिनीहरूलाई धेरै प्रीमियम देखिन्छ।
चार्जिङ केस पनि ग्लोसी फिनिशको साथ प्लास्टिक सामग्रीबाट बनेको छ। संग तीन एलईडी यसको अगाडि उनीहरूले हामीलाई प्रस्ताव गर्छन् चार्जको अवस्था बारे जानकारी ब्याट्री। र ए संग चुम्बकीय आधार जहाँ हेडफोनहरू एकसाथ नजिक ल्याएर पूर्ण रूपमा फिट हुन्छन्।
को नियन्त्रणहरू भौतिक हेडफोन हो स्पर्श। हामीले अडियो प्लेब्याकलाई अगाडि वा पछाडि पार गरेर नियन्त्रण गर्न सक्छौं। रोक्नुहोस् o खेल्नु गीतहरू। कलहरू जवाफ दिनुहोस् वा अस्वीकार गर्नुहोस्, र हाम्रो आवाज सहायक पनि आह्वान गर्नुहोस्। सबै कुञ्जीस्ट्रोक वा "टचहरू" को पुनरावृत्ति मार्फत, वा लामो किस्ट्रोकहरू मार्फत।
Ugreen X5 वायरलेस हेडफोनले हामीलाई प्रस्ताव गर्दछ १ 28 घण्टा सम्मको स्वायत्तता यसको चार्जिंग केसको लागि धन्यवाद। र तिनीहरू निर्बाध सञ्चालन गर्न सक्षम छन्7घण्टा सीधा। धेरै दिनको प्रयोगको लागि तपाईको ब्याट्रीको बारेमा चिन्ता लिनु पर्दैन।
यहाँ आफ्नो हेडफोन किन्नुहोस् Ugreen HiTune X5 अमेजनमा।
Nintendo स्विच को लागी ब्लुटुथ एडाप्टर
यसको नामले यस सहायकको प्रकार्यको बारेमा कुनै शंका छोड्दैन। हामीले तपाईंलाई सुरुमा भनेझैं, Ugreen को लक्ष्य मध्ये एक हो हाम्रा उपकरणहरूको सम्भावनाहरू विस्तार गर्नुहोस् इलेक्ट्रोनिक र यो भरोसा गर्न स्पष्ट छ हाम्रो Nintendo स्विच मा ब्लुटुथ जडान यसलाई अझ राम्रो सहायक बनाउँछ।
यसको भौतिक डिजाइन र यसको आकार पूर्णतया भिडियो-कन्सोलको रूपमा कन्डिसन गरिएको छ। र अपेक्षित रूपमा, यो एक पूर्ण रूपमा फिट हुनेछ र यसको सही प्रयोगमा बाधा पर्ने छैन। निस्सन्देह, एक सहायक यो यन्त्रको भाग जस्तो देखिन्छ.
एडाप्टरलाई धन्यवाद ब्लूटूथ 5.0 Ugreen द्वारा हामी अन्ततः Nintendo स्विचको साथ हाम्रो वायरलेस हेडफोनहरू प्रयोग गर्न सक्छौं मनपर्ने। तिनीहरूलाई सजिलैसँग जडान गर्नुहोस् र आनन्द लिनुहोस् एक वायरलेस गेमिङ अनुभव। उसको संग 120००० mAh ब्याट्री तपाईंसँग खेल्नको लागि प्रशस्त हुनेछ लगातार छ घण्टा सम्म.
यसलाई तपाइँको निन्टेन्डोमा प्लग गर्ने बित्तिकै यसलाई खोल्नुहोस् र तपाइँको वायरलेस हेडफोनहरू तुरुन्तै यसको इन्टरफेससँग जडान गर्नुहोस्। एक पटक लिङ्क भएपछि, जडान सधैं स्वचालित रूपमा बनाइनेछ। यसमा छ एक साथ दुई हेडफोन जडान गर्न सम्भावनायदि तपाइँ खेल साझा गर्दै हुनुहुन्छ भने। र हामीसँग १० मिटरसम्मको दायरा छ।
जस्तो कि हामीले देख्यौं, एउटा सहायक जसले आवश्यकता पूरा गर्दछ जुन हामीले भनेका छौं कि Ugreen प्रस्तावित छ। यो सानो उपकरण बनाउँछ जडानमा हाम्रो स्विच लाभहरू र थप सहज प्रयोगकर्ता अनुभव प्रदान गर्दछ र अन्ततः धेरै राम्रो र थप पूर्ण।
आफ्नो एडाप्टर प्राप्त गर्नुहोस् ब्लुटुथ Nintendo स्विच अमेजनमा
हामीले प्रयास गर्न सक्षम भएको अर्को सहायक हो Ugreen ट्याब्लेट स्ट्यान्ड। एउटा सहायक उपकरण जुन बजारमा आफूलाई स्थापित गर्न ढिलो भएको छ र आश्चर्यजनक रूपमा ट्याब्लेटहरू भन्दा धेरै ढिलो आइपुग्यो। यस अवस्थामा, एक समर्थन हामी व्यावहारिक रूपमा ट्याब्लेटको कुनै पनि मोडेल प्रयोग गर्न सक्छौं र यसले यसलाई समतल सतहमा सुरक्षित र स्थिर रूपमा समात्नेछ।
हाम्रो ट्याब्लेटको लागि समर्थन छ यसको प्रयोगलाई थप सहज बनाउँछ। विशेष गरी जब हामी मल्टिमिडिया सामग्री उपभोग गर्न ट्याब्लेट प्रयोग गर्छौं जब हामीले तिनीहरूसँग लेख्न वा अन्तर्क्रिया गर्नु पर्दैन। हामी काम गर्दा टेबलमा समर्थन, वा त्यो YouTube रेसिपी बनाउन प्रयास गर्न भान्सा काउन्टरमा।
Ugreen सँग ट्याब्लेट र मोबाइलहरूको लागि समर्थन गर्न समर्पित यसको क्याटलगको अंश पनि छ। र यो हामी प्रयास गर्न भाग्यशाली भएको छ यो ढुवानी गर्न सबैभन्दा सहज छ किनकि यो पूर्ण रूपमा फोल्ड गर्न मिल्छ। र अवश्य पनि, प्रयोगको सबै समयमा भरपर्दो समर्थन पाउनको लागि पनि सहज।
मा बनेको प्लास्टिक धातु सामग्रीमा समाप्त भएको काजको साथ, यसले धेरै व्यावसायिक छवि प्रदान गर्दछ। एसतह प्रणाली सरल छ एकै समयमा प्रभावकारी रूपमा र हामी उचाइ र झुकाव समायोजन गर्न सक्छौं ताकि यसको प्रयोग बस्न वा उभिँदा सहज होस्, उदाहरणका लागि।
Amazon मा किन्नुहोस् ट्याब्लेट / मोबाइल समर्थन अमेजनमा
USB C बहु-पोर्टहरू
र हामीले तपाइँलाई प्रस्तुत गर्ने अन्तिम सामानहरू एक भएको छ आवश्यक, विशेष गरी MacBook कम्प्युटर प्रयोगकर्ताहरूको लागि। द कमजोर जडान, con पोर्टहरूको पूर्ण अभाव, जसले एप्पल ल्यापटपका विभिन्न मोडलहरू प्रदान गर्दछ। कतिपय अवस्थामा उनीहरूसँग मात्र हुन्छ एकल USB टाइप-सी कनेक्टर। र यो एक परिधीय जडान गर्न सक्षम हुन यस प्रकार को एक सहायक हुनु आवश्यक छ।
कसलाई कुनै पनि समयमा कम्तिमा एउटा USB मेमोरी जडान गर्न आवश्यक छैन? खैर, यो सम्भव छ कि यो सहायक बिना हामी यसलाई कुनै पनि तरिकामा जडान गर्न सक्दैनौं। यसैले यस प्रकारको कनेक्टर धेरै महत्त्वपूर्ण छ, विशेष गरी यस प्रकारको उपकरण प्रयोग गर्नेहरूका लागि। निस्सन्देह, कम्प्यूटर को "सामान्य" प्रयोग गर्न सक्षम हुन केहि आवश्यक छ। Ugreen ले तपाइँको कम्प्यूटर को सम्भावनाहरु लाई गुणन गर्न सक्षम मल्टिपोर्ट कनेक्टर ल्याउँछ।
विशेष गरी, मल्टिपोर्ट युग्रीन कनेक्टरको साथ, हामीसँग छ तीन USB USB.० पोर्टहरू, एउटा पोर्ट HDMI र एक जोडी स्लटहरू यसको पक्षमा मेमोरी कार्डहरू पढ्नुहोस्। यद्यपि हामीले USB C पोर्ट गुमायौं किनभने यो बिना हामी कनेक्टर प्रयोग गर्न र एकै समयमा ब्याट्री चार्ज गर्न सक्षम हुने छैनौं।
यहाँ तपाईं किन्न सक्नुहुन्छ 6-in-1 USB C हब अमेजनमा
लेखको पूर्ण मार्ग: ग्याजेट समाचार » ग्याजेटहरू » Ugreen, हाम्रो उपकरणहरूको लागि विभिन्न सामानहरू